कतारको मरुभूमिमा के गर्दैछन् सुदर्शन र पूजा ? « Ramailo छ
कतारको मरुभूमिमा के गर्दैछन् सुदर्शन र पूजा ?
निर्देशक सुदर्शन थापा यतिबेला फिल्म ‘रामकहानी’ छायाँकनका कतारमा छन् । नायिका पूजा शर्मा सहित कलाकार तथा प्राविधिकको टिम लिएर निर्माता समेत रहेका थापा यसै साता त्यहाँ पुगेका हुन् ।
फिल्ममा मरुभूमिको दृश्य आवश्यक रहेका कारण कतार गएको निर्देशक थापाले बताएका छन् । कतारको सिनमा नायिका शर्मा र त्यहाँकै कलाकारले अभिनय गरिरहेका छन् । नेपालबाट गएका रामकहानी टिमलाई व्यवस्थापनको जिम्मा कलाकार बिष्णु कार्कीले लिएका छन् ।
‘बिष्णु जीको सहयोगले गर्दा छायाँकन गर्न सजिलो भैरहेको छ’, निर्देशक थापा भन्छन् । त्यहाँ फिल्म खिच्नको लागि अनुमति लिन नै ८ लाख खर्चिनु परेको सुदर्शनको भनाई छ ।
कतार छायांकनका लागि सुदर्शन, पूजा र छायांकार सौरभ लामाको टिम नेपालबाट गएको छ । फिल्ममा पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ र केदार घिमिरे, जित नेपाल, रविन्द्र झा, विल्सन विक्रम राइको मुख्य भूमिका छ । तिम्रो लागि म छु बोलको गीत हेर्नुस् :
भदौ २२ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने ‘रामकहानी’ एउटा गीत सार्वजनिक गरिएको छ । फिल्मका गीतमा अर्जुन पोखरेलले संगीत दिएका छन् । आकाश र पूजासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :